प्रलोभनमा धर्म फेर्दै प्रवासी नेपालीहरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रलोभनमा धर्म फेर्दै प्रवासी नेपालीहरु
ज्याक्सन्हाईट न्यूयोर्क । प्रलोभनमा परेर प्रवासी नेपालीहरु दिनानु दिन धर्म परिवर्तन गर्दै आएका छन्।
क्रिश्चियन धर्ममा प्रवेश गर्ने र बाइबलका कुराहरु नै सृष्टिले रचेका भन्ने भ्रमका आधारका धर्म परिवर्तन गर्दै आएका हुन्।
प्रवास तथा न्युयोर्कका चर्चहरुमा बिद्धान भएका नेपालीहरु पनि ठगिदै आएका छन् । गत आईतबार जुन १० तारिख ७४ ब्रोड्वे ज्याकसन हाईट्, न्यूयोर्क सुबवे नजिकै रहेको बिएमबि म्यानपावर तथा गार्मेन्ट पसलमा नेपालीहरुको क्रिश्चियन भेला अचम्मको देखियो।
सच्चा क्रिश्चियनले चुरोट पिउदैन र आईतबार काम पनि गर्दैन । तर यहाँ चेन स्मोकर भजन गाउने बजाउने क्रिश्चियन नेपाली संगीतकारौ देखिए।
कामको खोजीमा आउनेहरुसंग डेढ सयदेखि दुई सय डलर शुल्क लिएर भारती कहाँ घरायसी मजदुरको काम दिलाई दिने बिस्वास दिलाईएको बताइएको छ। यस्ता विस्वास पाएर रकम बुझाएर काम नपाई आफ्नो रकम फिर्ता लिन धेरै समय झुल्लिएका धेरै दिदी बहिनी देखियो।
यिनै मध्यकी एक सुजान श्रेष्ठले पनि काम पाउन रकम बुझाएकी रहेछिन। तर उनले याहाको चालामाला थाहा पाएपछि आफूले बुझाएको रकम फिर्ता लिन धर्ना दिएर बसेकी भेटियो।
साथै यि हिन्दू पृष्ठभूमिका स्वघोषित क्रिश्चियन गंगा राई, सुवास संगीतकार्, जितेन्द्र र अन्य ग्रुप सित्तै खान पाउने भएर उडसाईड स्थित फिलिपिनो एशुवा चर्चमा सम्पर्क गरी नेपालीहरुलाई भेला गराई कृ क्रिश्चियन बनाएर एशुवामा ल्याउने गरेको छ।